Martial: “Nafsi ahaan ayaan u dilaa daafacyada!!” – Gool FM
Martial: “Nafsi ahaan ayaan u dilaa daafacyada!!”
(Manchester) 10 Jan 2016. Marka Martial uu heerkiisa ugu sarreeyo joogo, daawashadiisu waa farxad. Laakiin badi ololahan sidaas ma hayn.
Yeelkeede, kulamadii ugu dambeeyey waxa uu dib u helay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah gaar ahaan kulamadii Middlesbrough iyo Reading waxa uuna xusuusiyey jamaahiirta sababta uu u yahay HIBO soo koreysa.
Ma jiraan xiddigo badan oo uga fiican Martial marka ay timaado in si toos ah loo abaaro daafacyada.
Celinta Martial marka uu kacsan yahay waa u dhibaato daafacyada. Weeraryahanka waxa uu ka hadlay sida uu cilmi nafsi ahaan u ciqaabo daafacyada.
Isaga oo u warramaya United Review waxa uu yiri: “Waxaan isku dayaa in aan shaki ku abuuro kuwa iga soo horjeeda si aan kalsoonida uga qaado. Waxaan isku dayaa in aan ciyaaryahanada badi xasilooni darro oo aan dhigo hubanti la’aan waxa soo socda ah.
“Khaasatan kulankaas, waxyaabaha si fiican ayey iigu dhamaadeen. Waan ogaa in booskaas uusana ahyn kiisii dabiiciga ahaa, caadiyan waa daafac dhexe, markaa waxaan isku dayey in aan nolosha ku adkeeyo, waxaana qabaa in ay si wacan ku dhammaatay.”
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs Spezia 3-1 (Napoli oo usoo baxday rubuc-dhamaadka Coppa Italia)